MUQDISHO-:Shir Sanadeedkii GOS Oo lagu Doortey Gudoon cusub oo Afarta Sano soo | HobyoNet.Com
Friday, January 4th, 2013 | Posted by wararka
MUQDISHO-:Shir Sanadeedkii GOS Oo lagu Doortey Gudoon cusub oo Afarta Sano soo
SPORTS-MUQDISHO-:Shirweynihii 6aad ee gudiga Olombikada Soomaaliyed ee GOS oo ah heyadda ugu sareysa Sportiga dalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabteymagaalada Muqdisho,iyadoo halkaasi lagu doortey madaxda afarta sano eesoo socota maamuli doona Gudigaasi oo ay hoos yimaadaan toboneeyoxiriir iyo ururo sports.
Madaxdii goob jooga u ahayd shirweynahaasi oo ka socdey dowladdaSoomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa, Wasiir ku xigeenka iyo wasiirudowlaha hor-umarinta iyo arimaha bulshada,Bashiir Maxamed Jaamac(bashiir Goobe) iyo Maxamuud Barkahdle,iyagoo halkaasi kasoo jeediyeyqudbad ay ku cadeynayeen sida Gudiga olombikada iyo xiriiradiisa aywada shaqeyn ula yeelan lahaayeen dowladda dalka ka jirta.
Maxamuud Axmed Nuur Tarzan oo ah gudoomiyaha maamulka Banaadir iyoDuqa Muqdisho ayaa halkaasi daaha ka rogey furitaankii shirweynahaisagoo ku nuux nuuxsadey in Muqdisho ay iminka marti gelin kartociyaaraha caalamiga ah,iyadoo nabadgelyada ay tahay iminka mid leykuhaleyn karo, isagoo balamn qaadey in uu taageeri doono guud ahaanSportiga dalka,inkastoo uu kula dardaarmey in la joojiyo in magacciyaaryahano lagu dhoofiyo shaqsiyaad caadi ah oo la iibsado.
waxaa halkaasi laga aqriyey waxqabadkii gudiga Olombikada Soomaaliyeedmudadii 4-ta sano ahayd ee lasoo dhaafey,iyadoo xisaab iyo dhaqaalehorey loo isticmaaley lagu sharxay qaab qoraal Video ah iyo aqrinba,waxaana warbixinadaasi ku jirtey in wasiir ka tirsanaa wasiiradiidowladii KMG ay ku baxdey ilaa 7 kun oo dolar mar uu dibadda u raaceyGOS iyo wafdi ay hogaaminayeen.
Ma jirin cid la tartameysay Musharixiinta u taagneyd jagooyinkaGudoomiyaha, Ku xigenada ilaa xoghaynta, waxaana halkaasi codka kabixinayey ilaa 18 ruux oo ka kala socdey xiriiro hoos taga GOS ururoiyo 5 zone oo ka socdey gobolada dalka,iyadoo halkaasi uu ka maqnaa codkii saxaafadda GOS oo kursigiisu cidlo ahaa.
Si kastaba Gudoomiyaha GOS ayaa waxaa cod aqlabiyad leh oo gaaraya 18ku heley Cabdullaahi Axmed Tarabi, Ku xigenka 1-aad waxaa 17 cod Ku heley Axmed Xasan cabdi (Wataac) ku xigenka 2aad, Xasan Axmed CabdiElman,3aad Ibraahim Abuukar Shaamow, halka Xoghayaha loo doortey Duraan Axmed Faarax.
Sidoo kale waxaa halkaasi laga aqriyey magacyada gudiga fulinta ee GOSoo dhan 12, intooda badana ay yihiin gudoomiyaasha xiriiriada marka laga yimaado Khabiir Xaaji Maxamed Coloow,Cumar Baarajab,AbuukarIsloow iyo xubno kale.
waa doorashadii ugu horeysey ee ka dhinaca Gudiga Olombikada iskastooaysan jirin musharixiin horey loogu iclaamiyey inay soo gudbiyaan waxqabadkooda iyo inay tartamayaan yihiin hadana jawigu waxaa uu ahaa mid farxadeed oo laga dhowrayo gudoonkan cusub inay isbedel sameeyaan.
Wararka Ciyaaraha ee Wariye